कांग्रेस खराब पार्टी हो, अरु दुई पार्टी झनै खराब छन्- प्रदीप गिरी - Samachar PatiSamachar Pati
कांग्रेस खराब पार्टी हो, अरु दुई पार्टी झनै खराब छन्- प्रदीप गिरी
‘ढाँटेर राजनीति गर्दिनँ, कम्युनिष्टले जित्दैमा अधिनायकवाद आउँदैन’
सिरहा, १७ मंसिर । प्रदीप गिरीको लहान नगरपालिका १४ स्थित अस्थायी निवासमा पुग्दा उनको कोठा अस्तव्यस्त थियो । गिरी सहयोगीहरुलाई हप्काइरहेका थिए । बहिनी डा.मन्जुला गिरीलाई पनि चुनावका बेला अलि व्यवस्थित हुन निर्देशन दिइरहेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो, उनी चुनावका उम्मेदवार नभएर, कुनै लथालिंग घरका अभिभावक हुन् ।
‘तपाईहरु मलाई नै खोज्दै किन आउनुभएको ? यो मेरो सहयोगी पनि पत्रकार बन्दैछ, पत्रकार भन्यो कि कुनै ग्रहको भगवान आएजस्तो हुँदो रहेछ, लिएर आइहाल्छ म भा’ठाउँ’ झर्को मान्दै गिरीले हामीतिर हेरेर एकछिन कराए । अब कुनै पनि पत्रकारलाई समय नदिनू भन्दै उनी २० हजार रुपैयाँ खोज्न निस्किए ।
बहिनीलाई मोबाइल किन्न पैसा चाहिएको रहेछ, सहयोगीलाई भनेर २० हजार दिलाए, अनि हामीसँग कुरा गर्न बसे ।
सिरहा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले यो अन्तिमपटक हो भन्दै भोट मागेका रहेछन् ।
उनले खुलस्त पार्दै भने- म ढाँटेर राजनीति गर्दिन, कांग्रेस पार्टी राम्रो हो पनि भनेको छैन, मेरो पार्टी खराब छ, तर मलाई अटाउने पार्टी कांग्रेस बाहेक अरु देखाइदेऊ न त भन्दा कुनै पनि पार्टी कांग्रेसभन्दा असल देखिएनन् । यसपटक चुनाव लडेर कांग्रेसको एक सिट बढ्छ भने बढोस् भनेर चुनाव लडिदिएको हुँ ।
प्रदीप गिरीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धाको अवस्थाबारे बुझ्न गएका हामीले कुराकानी कसरी थाल्ने भन्ने मेलो पाउन सकेनौं । दार्शनिक नेता गिरीमा चुनावी मुड नै थिएन । चुनावमा उम्मेदवार बनेका नेताहरु आफ्ना कुरा मिडियाबाट मतदातामा लैजान आतूर हुन्छन् । तर, गिरी भने पत्रकारसँगै झर्को मानिरहेका थिए । तर, पनि हामीले चुनावमै केन्द्रित रहेर प्रश्न शुरु गर्‍यौं ।
तपाई लामै ग्यापमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आउनुभयो, त्यो पनि क्षेत्र परिवर्तन गरेर, किन हो ?
मैले आफ्नो संसदीय जीवनको शुरुवात प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै गरेको हो । बीचमा दुईपटक स्थानीय कारण संविधानसभामा समानुपातिकमा बसेको हुँ । यसपटक मैले चुनाव लड्न चाहेँ, पार्टीका मान्छेले पनि मलाई जन्मथलोमै बोलाए । त्यसैले यहाँ आएको छु । यसमा अरु केही भनिरहनुपर्ने कुरा छैन ।
तर, तपाईको कर्मथलो छाडेर जन्मथलो रोज्नुभएको हो ?
चुनाव लडेको ठाउँलाई कर्मथलो भन्ने अवधारणा धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो । सांसद त एउटा क्षेत्रका लागि होइन नि । आफ्नो क्षेत्रका लागि त नगरपालिकाको मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष भए भइहाल्थ्यो नि । दुर्भाग्यवस कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीले नै सांसदलाई क्षेत्रमा सीमित गरिदियो । तपाईजस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिले पनि मलाई अहिले कर्मथलोको प्रश्न उठाउनु भनेको त्यसकै द्योतक हो । यसका कारण धेरै छन् । यो त कांग्रेसको गढ हो नि । सोह्रैआना मैले रोजेर भन्दा पनि पार्टीले पनि यहीँ पठायो ।
यो मधेस आन्दोलनको उद्गम थलो लहानसहितको क्षेत्र पनि हो, पछिल्लोपटक एमाले निकै बलियो बनेको देखिन्छ, कत्तिको दबावमा हुनुहुन्छ ?
मतगणनाको हिसाबले हेर्ने हो भने, म भविष्यवाणी गरिदिन्छु, मेरो दुवै प्रतिस्पर्धीको मत जोडेर पनि बढी मत पाउँछु । चुनाव जित्ने भन्ने कुरामा मलाई कुनै समस्या छैन । बिचारको हिसाबले मधेसमा फोरमसँग मेरो बिचारधारा नजिक छ, मेरो बिचाराधारा सिके राउतहरुसँग मिल्दैन ।
मधेस पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यस राज्यबाट बहिस्करणमा परेको छ । मधेसीले यो राज्यमा सहभागिता र पहुँच पाएका छैनन् । राज्य भनेको प्रतिनिधिसभा होइन । प्रतिनिधिसभा त राज्यको अनुहारमात्र हो । अनुहारलाई देखाउन मधेसी, जनजाति, महिला पनि छन् भनेर देखाउन सकिन्छ । तर, तिनले संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैनन् । शरीर पुरानै छ भने मधेसीले मूलधारबाट बहिस्कृत नै छन् । तिनका एजेण्डा मैले उठाएको छु ।
तपाईका विपक्षीले तपाईले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको, नाकाबन्दीको समर्थन गरेको जस्ता आरोप लगाएका रहेछन् नि ?
चुनावमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ । विपक्षीहरुले अरु पनि धेरै आरोप लगाइरहेका मैले सुनिरहेको छु । चुनाव प्रचारमा मलाई भन्न मन नलागेको कुरा पनि मैले भनिरहेको हुन्छु । व्यक्तिगत लान्छाना मैले लगाइरहेको छैन । हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी आउनुभयो, मैले उहाँको बारे बढाइ चढाई बोलेँ । ओलीजी र प्रचण्डजीहरुको बारेमा मन नलाग्दा नलाग्दै पनि गाली गरेँ । यस्तै हो, चुनावमा जे पनि चल्छ ।
मैले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेकै हो, यसमा मैले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा छ र ।
लामो ग्यापपछि प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुभएको छ, विगतको र अहिलेको चुनावमा के फरक पाउनुभयो ?
विगतका चुनावभन्दा यो चुनाव कतिपय सन्दर्भमा फरक पनि छ । भर्खरै स्थानीय चुनावमा धेरै खर्च भएछ । खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेछ । यो चाहिँ एउटा अलि समस्याकै कुरा भयो । तर, विगतमा जस्तो आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, गोला बारुदको अवस्थ्ाा अहिले कम छ । सभ्य र शिष्ट ढंगले नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
म पैलो चुनाव लड्दा कांग्रेसको जुन संगठनात्मक ढाँचा थियो, अहिले बिल्कुल फरक भइसकेछ । नाम त कांग्रेसकै छ तर यति ज्यादा विकृत भइसक्यो कि पार्टी भन्ने नै रहेन । कांग्रेसमात्र होइन, एमाले र मधेसवादीमा पनि आयाराम गयारामहरु बढेका छन् । कुनै बैचारिक आस्था छैन, यसले चुनावको परिणाममै असर पार्छ । कम्युनिस्टहरुमा समेत बैचारिक प्रतिवद्धता देखिएको छैन, आज एउटा पार्टीमा छ, भोलि अर्कोमा गइसकेको हुन्छ ।
तपाईको स्वभाव पनि अलि फरक खालको छ, के भनेर भोट मागिरहनुभएको छ जनतासँग ?
यो ठाउँ मेरो जन्ममूमि हो । मेरो घर यहीँ बस्तिपुरमा छ । मेरी बहिनी मन्जुला गिरी हेर्नुस, यहीँ बसिरहेकी छ । म किन उम्मेदवार बनेँ भनेर मलाई भोट दिने कारण पब्लिकले सोध्दैन । म यहीँ जन्मेको, हुर्केको, मेरो बानी पनि उनीहरुलाई थाहा छ । उनीहरुले मेरो राम्रो नराम्रो सबै थाहा पाएका छन् । त्यसैले मैले यहाँ यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर केही भोट थपिनेवाला छैन ।
यसका साथै मैले यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर हस्ताक्षर गरेको छैन । मैले यहाँका जनतालाई पनि भनेको छु । यो संविधानलाई मधेसीको पक्षमा बनाउन प्रयास गर्छु भनेको छु । यो संविधान अधूरो छ, अपूरो छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण मैले हस्ताक्षर नगर्नु हो, यही कुरा मैले भनेको छु ।
कांंग्रेस खराब पार्टी हो भनेर म आफैंले भनिरहेको छु । तर, मलाई जनताले कांग्रेस भएर होइन, हाम्रो मान्छे हो भनेर भोट दिन्छन् ।
संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको कुरालाई चुनावी मसला बनाउनुभएको हो ?
यो तपाईलाई अहिले भनिहाल्ने बेला भएको छैन होला । चुनाव पनि एउटा लडाइ नै हो । जित्छु कि हार्छु भन्ने धेरै सोचेको छैन । भोटरलाई असर गर्छ भनेर मैले धेरै कुरा लुकाउने कुरा पनि छैन ।
साँचो कुरा भन्दा जित हारलाई असर गर्ला, तर मेरो यो अन्तिम लडाई हो । लामो समयदेखि कांग्रेसभित्र लडेँ । ठीक बेठीक जे भए पनि अहिले म अटाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै रहृयो । यो पार्टीको जति आलोचना गरे पनि, जति उपाहास गर्दा पनि यसका नेताहरुले मलाई विश्वास गरेर टिकट दिए । यो अन्तिम हो, मैले यो पार्टीमा धेरै पाएँ ।
अन्तिम भन्नाले अब तपाई चुनाव नलड्ने ?
मेरो चुनाव लड्ने अन्तिम हो । म यो चुनाव लडेर कांग्रेसको एक सिट बढ्छ भने म चुनाव उठ्छु भनेर उठेको हुँ । अब म चुनाव लड्दा पनि लड्दिनँ । म जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्दिनँ । मैले सत्य बोल्दा चुनाव हार्छु कि भन्ने डर छैन, तर म चुनाव जित्छु ।
अहिले म मधेसका बस्तीहरुमा गइरहेको छु । वास्तवमा मान्छेहरुको चेताना धेरै माथि गएछ । म मधेसको पक्षमा उभिएको छु भन्ने कुरा यहाँका जनतालाई भन्नुपर्ने रहेनछ । उनीहरु सबैले थाहा पाएका छन् । त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुलाई मिडियावालालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
आफ्ना प्रतिस्पर्धी एमालेका गंगाप्रसाद यादव र फोरमका राजलाल यादवबारे के भन्नुहुन्छ ?
मेरा प्रतिस्पर्धी आ आफ्ना पार्टीका एकदम गतिला उम्मेदवार छन् । शुरुदेखि नै राजनीति गरेका, राजनीतिमै बाँचेका मान्छे छन् । उनीहरुमा मैले कुनै खोट देखिरहेको छैन । गंगा यादव मेरै गाउँठाउँका हुन्, उनले अहिले मविरुद्ध अलि बढी नै हल्लाखल्ला गरिरहेका छन् ।
दुई महिनाअघिको स्थानीय चुनावको मतपरिणाम हेर्दा चाहिँ हारिन्छ कि भन्ने धरमर लाग्दैन ?
स्थानीय चुनावको परिणामले राष्ट्रिय चुनावलाई असर गर्दैन । सबै चुनाव स्थानीय हुन्छन्, तर एजेण्डा फरक हुन्छन् । अहिले तीन पार्टी छन्, तीन एजेण्डा छन् । बरु उम्मेदवारका रुपमा अरु दुई उम्मेदवारसँग मेरो तुलनै गरेका छैनन् । मलाई श्रेष्ठ नै भनेका छन् ।
पार्टीका रुपमा कता कता पार्टी चाहिँ… .भनेर अनुहार बिगार्ने गर्छन् । मैले हाँसेर भन्ने गरेको छु- मेरो पार्टी खराब छ, बाँकी दुई पार्टी झन् खराब छन् । मेरो पार्टीले थोरै काम गरेको छ, तर अरु पार्टीले त केही गरेकै छैनन् । कांंग्रेस खराब पार्टी हो भनेर म आफैंले भनिरहेको छु । तर, मलाई जनताले कांग्रेस भएर होइन, हाम्रो मान्छे हो भनेर भोट दिन्छन् ।
अनि कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद ल्याउँछन्, रुन पनि पाइँदैन भन्ने कुरा कांग्रेस नेताहरुबाट आइरहेको छ किन हो ?
म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । बिचारधाराको संघर्षमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीको मालेमावाद र कांग्रेसको समाजवाद छाड्दिनुस । प्रजातन्त्र भनेको मुख्यतः व्यक्तिको स्वाधीन चेतनालाई केन्द्रमा राखेर गरिने चिन्तन हो । साम्यवाद भनेको चाहिँ व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो हो भन्छ । अधिनायकवादी बिचारधाराका बाहक जसरी प्राचीन विचाराधारमा प्लेटो थिए, शंकराचार्य पनि थिए । हेगेल पनि थिए । यसको मतलब उनीहरुले अधिनायकवादी समाज बनाएका थिएनन्, उनीहरुको सोच अधिनायकवादी थियो, व्यक्तिले आँटेर अधिनायकवादी समाज बनाउने होइन ।
जुन यो सूचना संयन्त्रको विकास भएको छ, भूमण्डलीकरण आएको छ, यसको अगाडि कसैले चाहेर पनि अधिनायकवाद ल्याउन सक्दैन । एमाले र माओवादीले अधिनायकवाद ल्याउछन् भन्नु चुनावी प्रचारमात्र हो । शेरबहादुरजीले भनिरहनुभएको छ । यो कुरा म भन्छु, कुनै हालतमा अधिनावयकवाद ल्याउँदैनन् । तर, चुनावको बेला हो, म पनि भन्छु, आधारभूत रुपमा शेरबहादुर देउवा सही हुनुहुन्छ, एमाले माओवादी गलत छन् ।
ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेका छन्, कांग्रेसले जति त्रास सिर्जना गरे पनि बहुमत त ल्याउलान् नि होइन ?
म त उनीहरु विरुद्ध कुनै पनि हालतमा बहुमत नल्याउन् भनेर चुनाव लडेको मान्छे । कथम कदाचित एउटै चुनाव चिन्हमा लडेका भए कदाचित (ठूलो अक्षरमा क) बहुमत पनि ल्याउने थिए । कदाचित ठूलो क हुन्छ । तर अहिले अलग अलग चिन्हमा लडेको ठाउँमा त बहुमत ल्याउछन् भन्ने लाग्दैन ।
एमाले जम्मा १०३ ठाउँमा उठेको छ, कांग्रेस १४५ स्थान भन्दा बढी ठाउँमा लडेको छ । समानुपातिमा कांग्रेसको जति सिट एमालेको आउँदैन । कुनै पनि हालतमा एमाले र माओवादी गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतको सम्भावना म देख्दिनँ ।
त्यसोभए त प्रचण्ड र केपी ओलीको सहकार्य पनि चुनावसम्मलाई मात्रै हो त ?
विल्कुल । चुनावपछि सहकार्य प्रचण्ड र ओलीको हुँदैन । यसमा कुनै संशय छैन । कुन घटकसँग मिल्ने भन्ने कुरा प्रचण्डजीले त्यहीबेला निर्णय गर्नुहुन्छ । त्योबेला प्रचण्डलाई कांगेसले फेरि पनि काँध हाल्नेछ ।
पशुपालक किसानले उत्पादन गरेको दूध नबिके पछि त्यसको विरोधमा दूध सडकभरी
नवगठित नेविसंघ कास्कीको पहिलो निर्णय, तत्काल क्षेत्रीयअधिवेशन र करको विरोधमा प्रदर्शन